Chii chinonzi kuitisa kana webhu kubata? | ECommerce nhau
Chii chinonzi kuitisa kana webhu kubata?
Jose Ignacio | | Zvechokwadi uye nhau, eCommerce, StartUps uye vanamuzvinabhizimusi
Chimwe chezvinangwa zvikuru zvekuvandudza webhusaiti yechitoro chepamhepo kana commerce ndiko kuitisa kwayo. Ichi chikamu chakakosha kwazvo chedanho rekutanga naro kuti ripararire kana kusimudzira zvigadzirwa, masevhisi kana zvinyorwa zvarinoshambadzira. Neichi chikonzero, zvakakosha kuti zviitwe pamwe nekugona kukuru uye zvinogona kukanganisa vashandisi kana vatengi.
El webhusaiti yekubata Iyo inovandudzwa mukati meinonzi kunotora. Iyi ipfungwa yakabatana netekinoroji nyowani zvinoreva sevhisi inopa vashandisi veInternet sisitimu yekugona Chengetedza ruzivo, mifananidzo, vhidhiyo, kana chero zvemukati zvinowanikwa kuburikidza newebhu. Inofanirwa kunge iri kuita kunofanirwa kuve kwakarongwa kuitira kuti pasave nechinhu chinosiyiwa kuchirongwa.
Mune ino mamiriro akapararira, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kuitisa kana kubata webhu kwakakosha kwazvo pakuiswa kwekambani yedigital nekuti inoibatsira kuzvishongedza nayo kuvonekwa kukuru pamberi pevashandisi kana vatengi. Kusvikira pakuti zvakakosha kwazvo kusarudza iyo chaiyo kana yakakodzera kwazvo kuitisa kuti uone kana kwete kubudirira kwezviito zvako.
1 Chii chiri kuitisa?
2 Makirasi ekutambira aripo
3 Yakagovaniswa Kubata
4 Professional Kubata
Chii chiri kuitisa?
Kubatsira kwerudzi urwu rwewebhu yekubatira kunobva pakuti izvo zvakakosha kuti webhusaiti yako igare iri online uye ichiwanika pakupedzisira. Kunyanya mune izvo zviitiko umo kambani iri kutengesa chigadzirwa kana sevhisi uye nekudaro zvinoenderana nebasa iri pamusoro pevamwe. Nepo kune rumwe rutivi, zviri nyore kuyeuka kuti kunyangwe iwe uine Internet yekubatanidza haina kukwana. Kana zvisiri, pane kudaro, sarudzo yakanakisa ndeye kurenda webhu yekubatira sevhisi izvo zvinoshanda chaizvo uye zvinogona kugutsa zvaunoda chaizvo.
Chimwe chinhu icho iwe chaunofanira kuongorora nezvechinobatsira ndechekuti chine chekuita nezvakanaka zvaunogona kukupa panguva ino. Pakati pazvo pane zvinotevera zvatiri kuzokuratidza pazasi:
Inosimudza kuchengetedzeka kwesizinda yako nekupa yakavimbika masystem ayo, pamusoro pezvose, ari epamberi kwazvo mune zvinovimbiswa kuti zvinopinda Ose ari maviri maererano ne Hardware uye software.
Icho chirongwa chinoshanda kwazvo chekuchengetedza kubatana kwakachengeteka zvechokwadi, kusingaperi uye kugadzikana. Zvakakosha zvinhu kana iyo webhusaiti yakabatana nechitoro chepamhepo kana commerce.
Chishandiso chine simba chine donzvo rakakura ndekwekudzivirira kutadza kana kukanganisa mumasevhisi. Hazvishamise kuti, mumabhizimusi epamhepo chero chiitiko chemhando idzi chinogona kudhura zvakanyanya, zvese kubva pane yekutengesa uye yehupfumi maonero.
Uye pakupedzisira, ipai kuoneka kukuru kune avo vanoratidza zviri mukati mewebhusaiti, zvese maererano nezvinyorwa zvaro uye maererano nezvinhu zvekuona nezveruzhinji.
Makirasi ekutambira aripo
Iwo wekutanga mutemo waunofanirwa kuchengeta mundangariro kubva zvino zvichienda mberi ndeyekuti kubata kana webhu yekutamba haina yunifomu. Ndokunge, panogona kuve nemhando dzinoverengeka zvinoenderana nezvinodiwa chaizvo nevashandisi kana vatengi. Izvi mukuita zvinoreva kuti zvinoenderana nerudzi rwewebsite yauinayo kana yaunoda kugadzira, iwe unozoda yekutambira sevhisi kana imwe. Kuti nenzira iyi, vakwanise kuzadzisa mabasa avo nekuvimbika kukuru uye kubudirira kune zvido zvechitoro chepamhepo kana commerce. Pakati peavo vanonongedza zvinotevera izvo zvaticha taura pazasi.
Imwe yeanowanzoitika mumakore achangopfuura nekuda kwekuita kwayo kukuru uye izvo zvakare zvinokutendera iwe ponesa mari yakawanda mune chero zviitiko umo zvingamuka. Paunenge uri pane imwe, zvinoenderana nehurongwa hwaunosarudzira webhusaiti yako. Kusvikira pakuti pakupedzisira iwe unozogona kuve neakawanda mawebhusaiti akaitirwa pane imwecheteyo kuitisa. Chinhu chinonyanya kubatsira nezve zano iri ndechekuti zvichave nyore kuzviita kupfuura kuburikidza nekumwe kubata kwakaomarara kana kwepamberi. Iko kwausingazove nemari isingadiwe kana isingatarisirwe.
Hunhu hwayo hukuru hunosanganisira chokwadi chekuti inogadzira simba rakakura pasina kuomarara. Nerupiro rwezvigadzirwa zvetekinoroji zvakasimukira zvakanyanya kupfuura mune mamwe ese, senge na bandwidthYakawedzera simba CPU uye ndangariro mune zvese zviitiko. Ehezve, ivo vanonyanya kunangana nehunyanzvi chikamu, senge chaiyo kesi yechitoro chako kana bhizimusi repamhepo. Nemabasa akawandisa uye akatsanangurwa kubva pakutanga.
Izvo zvinozivikanwa seyakavanzika yega server uye imwe yemabhenefiti ayo makuru ndeyekuti inopa hukuru kuchinjika mune zvakagadzirwa zviwanikwa. Mupfungwa yekuti inokupa zviwanikwa zvakavimbiswa, zvinozivikanwa kupfuura zvese nekuti hazvina kugoverwa nemunhu. Kune rimwe divi, zvinomira pachena nekuti mutengo weserura une hunhu uhwu unowanzove wakadzikira pane uya wepanyama server.
Iyo ndeimwe yemaseva asinganyanyo kuzivikanwa nevazhinji vashandisi. Izvi zvinodaro nekuti inotsanangurwa kuburikidza nemuchina wepanyama unoenderana nekombuta komputa uye nekudaro inotungamirwa kune a yakasarudzika mutengioo yakasarudzika. Mupfungwa, iwo ndiwo maseva anobatsira kwazvo emawebhusaiti ane huwandu hukuru hwemotokari dzemwedzi. Kana iyi iri nyaya yako, unogona kunge uri mukana wekuiisa mukuita nekuti kazhinji mashandiro ayo anonyanya kushanda kupfuura mamwe mamodheru.
Kusvika pakuti iwe unozokwanisa kushandisa zviito zvirinani kune rako bhizinesi zvido. Uye zvakare, iwe haugone kukanganwa pekupedzisira kuti iyi kirasi yemaseva akasarudzika anosiyaniswa nekushandisa kwakanyanya kuburikidza nekurapa kwakasiyana zvakasiyana kubva kune vamwe. Nezvakanakira iyo inokupa iwe sarudzo yekuchinjisa kune mumwe mupi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Chii chinonzi kuitisa kana webhu kubata?
Chitoro chako chedigital chinoda here kudiwa kwekutisheni?
Nzira dzekubhadhara zvemagetsi commerce